हस्तमैथुन स्वास्थ्यका लागि फाइदा कि बेफाइदा ? – तहल्काखबर
हस्तमैथुन स्वास्थ्यका लागि फाइदा कि बेफाइदा ?
२०७४ फाल्गुन ३० गोपिन पोखरेल
एजेन्सी / हस्तमैथुनका सम्बन्धमा समाजमा अनेक धारणा रहेका छन् । कतिले यसलाई समस्या मानेका छन्, कतिले समधान । एकथरीको तर्क छ, हस्तमैथुनको स्वास्थ्यमा कुनै हानी छैन । बरु, यसले यौन आवेग शान्त गर्छ ।
यौन कुण्ठा हटाउँछ । मनोविकार हटाउँछ । अर्को फाइदा त के भने, हस्तमैथुनले बलात्कार जस्ता आपराधिक कृत्य कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । किनभने यसले क्षणिक रुपमा यौन उत्तेजना शान्त गर्छ ।
तर, किशोरवयमा पुगेपछि बढ्दो यौन चाहाना शान्त गर्न किशोररकिशोरीले यौनाङ्गमा स्पर्श गर्छन् । उनीहरुले यो कुरा खुलेर बाहिर भन्दैनन् । र, उनीहरुलाई लाग्छ, ‘कतै मैलें नराम्रो काम त गरिरहेका छैन ?’
यस्तै भावनाले उनीहरुमा हिनताबोध पैदा हुनसक्छ । विज्ञानले यसलाई गलत भन्दैन । हस्तमैथुनलाई स्वास्थ्यका लागि राम्रो र सामान्य मानिन्छ ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित युनिभर्सिटीकी ‘पब्लिक हेल्थ साइन्टिस्ट’ एन्थोनी सान्टेलाका अनुसार हस्तमैथुनले मधुमेह, प्रोस्टेट क्यान्सर र युरिन सम्बन्धी समस्या कम हुन सक्छ । अनुसन्धानमा सहभागी ९४ प्रतिशत पुरुषले आफूले हस्तमैथुन गर्ने गरेको स्वीकार गरेका थिए भने ८५ प्रतिशत महिलाले पनि आफूले हस्तमैथुन गर्ने गरेको स्वीकारका थिए ।जसमा केही गर्भवती महिला पनि सामेल थिए ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नजिता अनुसार कुनै महिलाले हस्तमैथुन गर्छन् भने उनीहरुमा ‘गर्भाशयमा हुन सक्ने संक्रमण’ र ‘मुत्र मार्गमा हुने संक्रमण’को सम्भावना कम हुन जान्छ ।यस्तै हस्तमैथुनले निन्द्रा नलाग्ने समस्या र तनावबाट पनि छुट्कारा मिल्छ । यस बाहेक हस्तमैथुन गर्नाले गर्भाशय नजिकको भाग पनि मजबुत हुन्छ । अध्ययनमा यो पनि पाइयो कि हस्तमैथुनले क्यान्सरबाट पनि जोगाउन मद्दत गर्छ ।
अध्ययनका अनुसार जो पुरुष नियमित रुपमा हस्तमैथुन गर्छन्, उनीहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा एकदमै न्यून हुन्छ । प्रोस्टेट ग्रन्थीबाट निस्कने विषाक्त पदार्थ (टोक्सिन) हस्तमैथुनका क्रममा निस्कन्छ र प्रोस्टेट क्यान्सरको सम्भावना पुरुषमा कम हुन जान्छ । त्यस्तै एक अष्ट्रेलियन जोडीले दावी गरेका छन् कि हस्तमैथुन गर्नाले ‘डिप्रेसन’बाट पनि छुट्कारा पाउन सकिन्छ । हस्तमैथुनका समयमा तनाव कम गर्ने ‘एन्ड्रोफिन’ उत्पादन हुन्छ, जसका कारण व्यक्ति खुशी रहन्छन् । यसले ‘कोर्टिसोल’ हर्मोनमा बृद्धि हुन्छ र शरीरको ‘प्रतिरक्षा प्रणाली’ मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ ।
यस्तै उक्त अध्ययनमा दावी गरिएको छ कि हस्तमैथुनले निन्द्रा नलाग्ने रोग र डिप्रेसन निदान हुन्छ र प्रतिरक्षा प्रणाली समेत मजबुत हुन्छ । उक्त अध्ययनमा यो पनि दावी गरिएको छ कि हस्तमैथुनबाट चाँडै नै सेक्सको चरम आनन्द समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसले नियमित चरम आनन्द प्राप्त गर्छन् उनीहरु तनावबाट मुक्त हुन्छन् भने उनीहरुको रक्तचाप पनि सामान्य रहन्छ र शरीरमा हुने पीडाबाट उनीहरु टाढा रहन्छन् । उक्त अध्ययनका अनुसार हस्तमैथुन गर्नाले आफ्नो ‘पार्टनर’लाई पनि खुशी बनाउन सकिन्छ अर्थात हस्तमैथुन गर्ने व्यक्तिको प्रस्तुति ओछ्यानमा पनि राम्रो हुन्छ ।
हस्तमैथुन के हो ?
यौनान्द लिनका लागि जब आफ्नो यौनाङ्ग स्पर्श गरिन्छ, हस्तमैथुन त्यही हो । हरेकले यो आ-आफ्नै ढंगले गर्छन् । हस्तमैथुनको क्रममा उनीहरु यौनजन्य दृश्य, वस्तु आदिको कल्पनामा डुब्छन् ।
के यसले स्वास्थ्यमा हानी गर्छ ?
हस्तमैथुनले स्वास्थ्यमा कुनै हानी गर्दैन । हस्तमैथुनले पागल वा अन्धा बनाउँदैन । हस्तमैथुन गर्दा आँखको तल कालो हुने वा शारीरिक विकास रोक्ने पनि गलत कुरा हुन् । सत्य त के भने, यसले हाम्रो तनाव कम गर्छ । शरीरमा खुसी संचार गराउँछ । खुसी ल्याउने हर्मोन इन्डारफिन्स श्राव गराउँछ । यसले रिल्याक्स महसुष हुन्छ ।
साथै हस्तमैथुनले सुत्नका लागि सहयोग गर्छ, निजी अंगलाई सक्रिय राख्छ । हस्तमैथुनले स्वास्थ्यमा हानी नपुर्‍याउने मात्र होइन, बरु यौन सम्पर्कभन्दा यो सुरक्षित र गोप्य पनि हुन्छ । यौन सम्पर्कमा कतिपय खतरा वा समस्या हुन्छ, जो हस्तमैथुनमा हुँदैन । यसले यौनजन्य रोगहरु सर्ने भय पनि हुँदैन ।
के हस्तमैथुन गर्नु गल्ती हो ?
हस्तमैथुन गल्ती होइन । यो आनन्द अनुभूत गर्ने प्राकृतिक तरिका हो । यसले स्वंमलाई आनन्द दिलाउँछ । यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि हो । सार्वजनिक स्थानमा यस्तो काम गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ । हस्तमैथुन युवायुवती दुबैले गर्छन् । युवाहरुमा १७ बर्षको उमेरपछि हस्तमैथुनको इच्छा तिब्र हुन्छ ।
तुलनात्मक रुपमा युवतीहरुलाई हस्तमैथुन गर्न असहज हुन्छ । उनीहरु आफ्नो यौनाङ्ग खेलाएर वा योनीमा कुनै बस्तु घुसाएर आनन्द लिन्छन् । यस्तो गर्नु त्यसबेलासम्म सुरक्षित हुन्छ, जब त्यो कष्टरहित हुन्छ ।
ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने, यसरी हस्तमैथुन गर्दा सही र सुरक्षित ढंगले गर्नुपर्छ । घाउ, चोट लाग्ने, अड्कने, ब्याक्टेरिया फैलने कुरामा सर्तक हुनुपर्छ । फोहोर एवं असुरक्षित चिज प्रयोग नगरौं ।
आफु जेलमा हुँदा पत्नी गर्भवती भएर घरमै बच्चा जन्माएको खबर सुनेर दंग पर्छन कैदीहरु
नेपालका सामु ११५ रनको लक्ष
कन्काई नगरपालिका वडा नं –६ पनि खुल्ला दिसामुक्त
२०७४ मंसिर १० गोपिन पोखरेल
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणमा सरकार सकारात्मक
२०७५ श्रावण ६ गोपिन पोखरेल
मनोज गजुरेलले खोले सम्बन्ध विच्छेदको यस्तो कारण
२०७४ माघ ९ January 23, 2018 गोपिन पोखरेल